Ka Faalooshada Miisaaniyadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tommy Waidelich, af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga (S)
Ka Faalooshada Miisaaniyadda
La daabacay tisdag 20 september 2011 kl 12.07
Tommy Waidelich, af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga mucaaradka Sooshiyaaldimoqoraadiga ayaa ku dhaleeceeyay in Anders Borg, wasiirka dhaqaaluhu buunbuuninayo xaaladda kobaca dhaqaale ee sannadaha 2013-2014.
Waidelich ayaa qaba in xaaladdu noqon doonto mid jiidanta, isagoona ku dhaleeceeyay Anders Borg in aannu u sahay ururin dalka marka la eego dhaqaale xummada ku soo food leh. Sidoo kale wuxuu sheegay af-hayeenku iney weli taagan tahay heerkii 2006 bulshada ka faqooqan bulshada inteeda kale.
Af-hayeenka dhaqaale ee xisbiga Bidixda Ulla Andersson ayaa dhaleeceeysay miisaaniyadda 5,4-ta milyaard ee lagu dhimayo canshuurta dahsoon ee maqaayadaha, iyadoona intaa raacisay in dhaqaalahaa looga baahnaan lahaa sidii la isugu badali lahaa jiilkii hore iyo kan cusub ee xarrummaha daryeelka waayeelka. Tallaabadaasina suurtagelin lahayd sida ay Ulla Andersson qabto abuuridda 25 000 goobo shaqo ee hor leh.
Xisbiga Sverigedimoqoraadiga ayaa ku dhaleeceeyay miisaaniyadda dawladda ee suuqa-shaqada mid aan wax-tar sidaa u ballaaran yeelanayn. Waddammadii horey ugu tallaabsaday dhimista cashuurta dadban ee maqaayadaha ayaa horey ugu guuldarreeystey, sida uu qoraal-saxaafadeed ku sheegay hogaamiyaha xisbiga Sd Jimmie Åkesson.
Miisaaniyadda ayaa sidoo kale dhaleeceeyn uga timid dhanka bangiyada. Cecilia Hermansson, madaxa waaxda dhaqaalaha ee Swedbank, ayaa sheegtay in ay tahay rajo un in la aamino in koboca dhaqaale ee dalku gaari doono heerka sidaa u sarreeya ee 4%, sannadka 2013:
- Midda lala yaabaa waxay tahay in is-bedel sidaa u wayn muddadaa yar ku dhaco, iyadoo weliba qaaradda Yurub ku sugan tahay xaalad adag ee deymo iyo koboc dhaqaale ee hooseeya.
Robert Bergqvist, madaxa laanta dhaqaalaha ee bankiga SEB, ayaa isaguna sheegay in miisaaniyadda dawladdu soo bandhigtay ka tarjumayo aqlabiyaddarrida dawladda ee baarlamanka:
- Waa miisaaniyad ka tarjumeeysa dhaqaale-xumida iyo xaaladda baarlaman. Waana mid lala jaanqaadayo xaaladahaa iyo in aan la hiigsan tallaabooyin aan ka hir-galeyn baarlamanka.
Miisaaniyadda dawladda ayaa u muuqata mid taxadar ku dheehan tahay, sida uu qabo madaxa ururka heyadaha manaafacaadka Urban Bäckström, kana welwelsan himmad-la'aanta dib u habayn ee dawladda.
Ururka shaqaalaha ee Unionen wuxuu isaguna suulka hoos ugu dhigay dhimista cashuurta dahsoon ee maqaayadaha iyo saadaalinta dhaqaale ee dawladda oo sarreeysa.